South Africa Yoronga Kuomesera Vanhu Vekune Dzimwe Nyika paNyaya yeMabasa
Sangano guru rinomiririra mabhizimisi muSouth Africa, reBusiness for South Africa, kana kuti (B4SA) rayambira hurumende yava Cyril Ramaphosa, kuti ivhure makambani nekukasika munguva yelockdown sezvo vanhu vakawanda vachapedzisira varasikirwa nemabasa.
Imwe nhengo yepamusoro musangano iri, VaMartin Kingston, vanoti vanhu vanosvika mamirioni mana, kusanganisira vanobva kunze kwenyika, vacharasikirwa nemabasa kubva mukuvharwa kwemakambani nehurumende, ichiedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Chikumbiro chavo, chinouyawo mushure mekunge hurumende yeSouth Africa, yazivisawo kuti iri kugadzirisa mutemo uchashandiswa, nemakambani emunyika iyi mukupinza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mabasa. Gurukota rezvevashandi munyika iyi, VaThulas Nxesi vakati mutemo uyu unofanira kudzikwa nechimbichimbi.
Mutemo uyu, uyo uchashandiswa nevarimi, vemumahotera, nevanoita zvekuvaka, pamwe nevemudzimba, uchaomesera zvikuru vanobva kunze kwenyika sezvo ari iwo Mabasa akawanda anoitwa nezvizvarwa izvi.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro che Tswane University of Technology, Dr Rick Mkonza, vanoti chirwere cheCovid-19 chichaita kuti mhuri yeZimbabwe inorarama nekushanda iri muSouth Africa, itambure zvakanyaya.
Mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association, kana kuti ICBTA, vaDenis Juru, vatsigirawo mashoko aya, vakati sangano ravo rinofanira kutsvaga nzira dzekubatsira nhengo dzaro. Vati sangano ravo richakurudzira mhuri yeZimbabwe ine mabhizimisi muSouth Africa, kuti vaedza nepose pavano kwanisa kubatsira nhengo dzeICBTA, kana zvinhu zvaita manyama amire nerongo.
VaWellington Manyonda, avo vanomiririra sangano reZim Truckers Association, vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kukasika kugadzirisa mamiriro ehupfumi hwayo, sezvo nhengo dzesangano ravo dzinoshandira dziri muSouth Africa, dzave panguva yakaoma.
VaNesbert Mahanya, vanobva kuMasvingo vanoti varikufunga zvekudzokera kumusha uko vanoti vachano zvitangira mabasa emawoko.
Kutanga muna Ndira 2018, South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Zimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP chekupa mapepa kune vanoda kudzidza nekushanda munyika iyi. Magwaro aya ari kutarisirwa kushanda kusvika muna Zvita gore rinouya uye zvinotaridza kuti kuda kuwedzera nguva kuchanetsa.
Chirongwa cheZEP chakatsiva chimwe chainzi Zimbabwe Special Permit chakasvika kumagumo muna 2017. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zvuru zana nemakumi manomwe 170 00 ndizvo zvine magwaro ekugara muSouth Africa pasi peZEP.
Mutauriri werimwe sangano rePeople Against Suffering, Oppression and Poverty (PASSOP) Muzvare Tendai Bhiza vanoti vatotanga kuona kushanduka kwezvinhu.
Hapana anonyatsoziva kuti muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvingani sezvo zvakawanda zvacho zvisina magwaro ari pamutemo ekugara munyika iyi. Asi vamwe vanofungidzira kuti zvinogona kusvika kana kudarika mamiriyoni matatu.